प्राकृतिक स्राेत वेचिएका छन् तर जनप्रतिनिधि किनिएका छन् - Hamro Najar
प्राकृतिक स्राेत वेचिएका छन् तर जनप्रतिनिधि किनिएका छन्
प्रकाशित मिति: २०७८ जेष्ठ २७, बिहिबार (१ हफ्ता अघि)
प्रशासन माैन छ । सराेकारवाला निकाय मुकदर्शक छन् । प्राकृतिक स्राेत वेचिएका छन् तर जनप्रतिनिधि किनिएका छन् । सानीभेरीकाे गाैरवकाे रुपमा रहेकाे बालुवा राेडा ढुंगा गिट्टी अवैध रुपमा दाेहन भएकाे विषयमा नेकपा रुकुम पश्चिमका नेता नरेन्द्र विकले अाक्राेश पाेख्दै सामाजिक सन्जालमा यसरी लेख्छन् ।
यति बेला मुलुक कोभिड-१९ को महामारीले आक्रान्त छ। जनजीवन निकै कष्टकर बनिरहेको छ। जनता हरदिनदिनैको दैनिकी कसरी चलाउले भनेर दिनरात सास्तिमा छन। तर कथित जनप्रतिनिधि भनिने महाशयहरु भने यसयति बेला मुलुक कोभिड-१९ को महामारीले आक्रान्त छ। जनजीवन निकै कष्टकर बनिरहेको छ। जनता हरदिनदिनैको दैनिकी कसरी चलाउले भनेर दिनरात सास्तिमा छन। यसरी तावरणिय चक्र खलबलाउने गरि नदि दोहनमा सक्रीय छन। न बाताबरण प्रभाव मुल्यांकन छ। न कति निकाल्ने हो त्यस्को एकिन तथ्यांक छ। न स्थानीय सरोकारवाला सङ्ग छलफल वा सार्वजनिक सुनुवाइ वा समस्या सम्बोधनमा कुनै तदारुकता छ।
यसरी दिनदाहडै प्रशासनको नाकै मुनि यस प्रकारको प्राकृति सम्पदाको चरम दोहन हुनु।यस्को प्रभावकारी नियमन नहुनु। पटक पटक स्थानियले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउदा पनि कहि कतै बाट कुनै सुनुवाइ नहुनु निकै गम्भीर छ।
केन्द्रमा केपिले खोलानाला गिट्टि वालुवा चुरे सब बेच्ने भए भनेर १२ हात उफ्रीएर रोइलो मच्चाउने महाशय हरु रुकुमको सान! गौरव सानीभेरिमा यस्तो ताण्डप हुदा चाहिँ मुखमा के बुझो लगाएर बसेका छन कुन्नी ?
माछिमि र सानचौर जोड्ने पुल छेउमा बसेर सानी भेरिका बालुवा गिट्टी चोरि निकाशी बन्द गरौ महासय। देखाउनलाइ मध्यपहाडी लोकमार्गको काम अनि धन्दा चाहिँ राप्तिलोक मार्गका निर्माणकार्यमा अवैध बिक्रि वितरण ?
घाट नै मासेर यसरी उत्खन गर्नु महाअपराध हो। त्यस्मा माथी प्रकृति आश्रति जिवजनावर लोप हुँदै गएका छन। अतिबृष्टि अनाबृष्टी देखि लिएर प्रकृतिमा अनेकन समस्या देखिइरहेका छन। जस्तो कारण मानव र मानवीय जगतले ठूलो मूल्य चुकाइ रहनु परेको छ।
अवैध रुपमा गरिएको नदि दोहन र त्यस्को संरक्षणमा लाग्ने जो कोहि कार्वाहीको भागिदार छ्न।
नेकपा नेता नरेन्द्र विककाे वालवाट साभार